လွန် ခဲ့ တဲ့(၁၀)နှစ်ကျော် က ပရိသတ်တွေမမြင်ဖူးသေး တဲ့ ချစ်ဇနီး နဲ့ရိုက်ကူး ခဲ့တဲ့ပုံရိပ်လေးတွေထုတ်ပြလိုက်တဲ့ နိုင်းနိုင်း – Shwewiki.com
လွန် ခဲ့ တဲ့(၁၀)နှစ်ကျော် က ပရိသတ်တွေမမြင်ဖူးသေး တဲ့ ချစ်ဇနီး နဲ့ရိုက်ကူး ခဲ့တဲ့ပုံရိပ်လေးတွေထုတ်ပြလိုက်တဲ့ နိုင်းနိုင်း
သ ရုပ်ဆောင် မင်းသား နိုင်းနိုင်းဟာ တစ်ခေတ်တစ်ခါက နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ပါးစပ်ဖျားမှာ ရေပန်းအစားဆုံး မင်းသားတစ်လက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့တည်ကြည်ခန့်ညားမှုနဲ့ စမတ်ကျကျဖက်ရှင်တွေဝတ်ဆားဆင်ယင်မှုတို့ကြောင့် အားလုံးကကြွေခဲ့ရတာပါ။ ယနေ့ချိန်ထိတိုင်အောင် နုပျိုလန်းဆန်းနေတာဟာလည်း ဘုရားပေးတဲ့ ဆုလာဘ်ပါပဲ။
သူ ဟာ လတ်တလောမှာတော့ မိသားစုရှိရာ နယူးယောက်မြို့ကို ခေတ္တရောက်ရှိနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင်မှာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသစ်တွေရိုက်ကူးရန် မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ရတော့မှာပါ။ မပြန်ခင်လေးမှာ ဇနီးနဲ့ကလေးတွေနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အချိန်လေးတွေ ဖြတ်သန်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မနေ့ညကလည်း သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင် ချစ်ဇနီးလေးနဲ့အတူ ရိုက်ကူးထားတဲ့ အမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေ ဝေမျှထားတာပါ။ ဒီနေ့လေးဟာလည်း အိမ်ထောင်သက်တမ်း(၁၂)နှစ်ပြည့်နဲ့ ချစ်ဇနီးလေးရဲ့ မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးပဲဖြစ်ပြီး နိုင်းနိုင်းကလည်း ” Happy birthday & Happy Anniversary…My wife.
၂၀၀၈ မှ ၂၀၂၀ တိုင်တိုင် ချစ်ခင်မှု၊ နားလည်မှု၊ သံယောဇဉ် ကြီးစွာနှင့် ၁၂နှစ်တိုင်တိုင် လက်တွဲပြီး ဘဝကို လက်တွေ့ကျကျဖြတ်သန်းလာခဲ့ကြတယ်။ လောကဓံ ဘာလဲဆိုတာ ငါတို့ ကောင်းကောင်းကြီး သိခဲ့ရပြီ… ၁၂နှစ်မှသည်…နောင် ၁၂၀ တိုင်အောင် ငါတို့ ဘဝလှေကြီးကို ဖြတ်သန်းမောင်းနှင်ကြပါစို့… (ငါတည်ဆောက်ထားသော ဘဝလှေမှာပဲ ငါ့အသက်နှင့်ခန္ဓာမြဲနေသ၍ ငါနေသွားမှာပါ) #Actor99″ ဆိုပြီး ရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေအတွက် ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။Source and Photo Credit- Actor99’s Facebook Page
သ ရုပျဆောငျ မငျးသား နိုငျးနိုငျးဟာ တဈခတျေတဈခါက နှုတျခမျးနီမလေးတှရေဲ့ပါးစပျဖြားမှာ ရပေနျးအစားဆုံး မငျးသားတဈလကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူ့ရဲ့တညျကွညျခနျ့ညားမှုနဲ့ စမတျကကြဖြကျရှငျတှဝေတျဆားဆငျယငျမှုတို့ကွောငျ့ အားလုံးကကွှခေဲ့ရတာပါ။ ယနခြေိ့နျထိတိုငျအောငျ နုပြိုလနျးဆနျးနတောဟာလညျး ဘုရားပေးတဲ့ ဆုလာဘျပါပဲ။
သူ ဟာ လတျတလောမှာတော့ မိသားစုရှိရာ နယူးယောကျမွို့ကို ခတ်ေတရောကျရှိနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။ မကွာခငျမှာ ရုပျရှငျဇာတျကားသဈတှရေိုကျကူးရနျ မွနျမာနိုငျငံကိုပွနျရတော့မှာပါ။ မပွနျခငျလေးမှာ ဇနီးနဲ့ကလေးတှနေဲ့အတူ ပြျောရှငျစရာကောငျးတဲ့အခြိနျလေးတှေ ဖွတျသနျးနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။
မနညေ့ကလညျး သူ့ရဲ့လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာတှငျ ခဈြဇနီးလေးနဲ့အတူ ရိုကျကူးထားတဲ့ အမှတျတရပုံရိပျလေးတှေ ဝမြှေထားတာပါ။ ဒီနလေ့ေးဟာလညျး အိမျထောငျသကျတမျး(၁၂)နှဈပွညျ့နဲ့ ခဈြဇနီးလေးရဲ့ မှေးနရေ့ကျမွတျလေးပဲဖွဈပွီး နိုငျးနိုငျးကလညျး ” Happy birthday & Happy Anniversary…My wife.
၂၀၀၈ မှ ၂၀၂၀ တိုငျတိုငျ ခဈြခငျမှု၊ နားလညျမှု၊ သံယောဇဉျ ကွီးစှာနှငျ့ ၁၂နှဈတိုငျတိုငျ လကျတှဲပွီး ဘဝကို လကျတှကေ့ကြဖြွတျသနျးလာခဲ့ကွတယျ။ လောကဓံ ဘာလဲဆိုတာ ငါတို့ ကောငျးကောငျးကွီး သိခဲ့ရပွီ… ၁၂နှဈမှသညျ…နောငျ ၁၂၀ တိုငျအောငျ ငါတို့ ဘဝလှကွေီးကို ဖွတျသနျးမောငျးနှငျကွပါစို့… (ငါတညျဆောကျထားသော ဘဝလှမှောပဲ ငါ့အသကျနှငျ့ခန်ဓာမွဲနသေ၍ ငါနသှေားမှာပါ) #Actor99″ ဆိုပွီး ရေးသားထားတာပဲဖွဈပွီး ပရိသတျတှအေတှကျ ပွနျလညျတငျဆကျပေးလိုကျရပါတယျ။Source and Photo Credit- Actor99’s Facebook Page
ပြစ်ဒဏ် ကျခံနေ ရ တဲ့ မေသန်းနု ရဲ့အမှာစကား ကို တ ဆင့်ပြန်လည်မျှဝေလာတဲ့ စိန် လင်း (Aroma)
11 နှစ်အ ရွယ်ကောင်လေး ကို မတော်မတရားပြုကျင့်ပြီး ကိုယ်ဝန်ရခဲ့သူ ကို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပြီ